कोरोनाका बालबच्चा अब हाँसेरै मर्ने भए ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
असोज ३, २०७७ शनिबार ८:३५:५९ | मिलन तिमिल्सिना
कोरोनालाई रोक्न, छेक्न र खेद्न के के मात्र गरिएन ? ६÷६ महिना घरभित्र लुकियो । कहिले लकडाउन, कहिले सटडाउन, कहिले निषेधाज्ञा, कहिले कर्फ्यु, कहिले सिल, कहिले के नाम दिएर कोरोनालाई तर्साउन खोजियो ।
बेसारपानी, गुर्जो, हर्रो, बर्रो, तितेपानी देखाइयो । कहिले सेना तैनाथ गरियो, कहिले प्रहरी ! र, तिनले नसकेका बेला टोले गुण्डा पनि तैनाथ गरियो । कहिले सडक र बजारमा चौबीसै घण्टा कोरोनालाई मात्र हिँड्न दिइयो । कहिले मान्छे र कोरोना हिँड्ने तालिका बनाइयो । तै पनि केही जोर चलेन । कोरोनाले छोड्नै मानेन ।
लुकेर र आलोपालो गरेर पनि कोरोना नतर्सिएपछि सरकारले नयाँ रणनीति ल्याएको छ–अब कोरोनासँग लुक्ने होइन, भिड्ने ।
कोरोनासँग भिड्न एकैपटक धेरैखाले अस्त्र प्रयोगमा ल्याइएका छन् । यहीबेला सडक बजार खुलेको छ । लामो दूरीका गाडी चल्न थालेका छन् । आकाशमा जहाज उड्दैछन् । आफ्नै रेल देश भित्रिएको । अरु कसैले गर्न नसक्ने काम गर्ने वामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा पुग्नुभएको छ । बिजुली अड्डामा छँदा बढेको कुलमानको ख्याति बाहिरिएपछि आकासिएको छ । मलमास यहीबेला परेको छ, दशै एक महिना पछि सरेको छ । यी सबै कोरोनाविरुद्ध प्रयोग भएका अस्त्र हुन् ।
सरकारको नयाँ रणनीतिअनुसार कोरोना आकाश, पाताल, सडक, बजार, घर, चौर, मैदान जहाँ पुगेको भए पनि अब नबच्ने भएको छ ।
जहाँ जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि कोरोना मान्छेको फेला पर्ने भएको छ । नेपालीसँग हायलकायल भएर भाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
६ महिनासम्म रोकिएका सबैखाले गाडी अब चल्न थालेका छन् । छोटो दूरीमा हिँड्ने कोरोनालाई छोटो दूरीमा चल्ने गाडीले कुल्चेर मार्नेछ । लामो दूरीमा यात्रा गर्ने कोरोनालाई लामो दूरीमा चल्ने गाडीले पेल्नेछ । जोर नम्बर भएको कोरोनालाई जोर नम्बरको दिन जोर नम्बरको गाडीले र बिजोर नम्बर भएको कोरोनालाई बिजोर नम्बरको दिन बिजोर नम्बरको गाडीले ठक्कर दिनेछ ।
कोरोना आकाशमा पनि हुन सक्छ । अब आकाशमा भएको कोरोना पनि बाँच्न पाउँदैन । आन्तरिक र बाह्य उडानले उडेको कोरोनालाई जमिनमा खसाउनेछ । गाडी र जहाज मात्रै होइन, अब त रेल पनि गुड्ने भएको छ । नेपालको आफ्नै रेल आइपुग्यो । गाडीले नसकेका कोरोनालाई रेलले ठक्कर दिनेछ । कोरोना ठाउँको ठाउँ ठहरै हुनेछ ।
गाडी, रेल र जहाजको ठक्करबाट समेत नमासिएका कोरोनालाई नेपालीले हिँडेरै, दौडेरै, डुलेरै, घुमेरै कुल्चेर मार्नेछन् । अब दिन र बार हेरेर होइन, फुर्सद हुनेबित्तिकै बजार जान पाइने भएको छ । केही काम नभए पनि बजार डुल्ने र घुम्ने अवसर आएको छ । बाटोघाटो, छेउकुना, झारबुट्यान, सरसामानतिर अल्झिएर बसेका भाइरस पनि अब मर्ने भएको छ ।
केही दिनअघिसम्म दशैँ मान्न पर्दैन कि भन्ने थियो । अब सरकारले दशैँ मान्न दिने भएको छ । एकसुको नभए पनि, काम र कमाइ गुमे पनि नेपालीले दशैँमा मासु खान छोड्दैनन् । दशैँमा मासु खाएर बलियो भएपछि सबै नेपाली देखेर कोरोना आफैं पनि भाग्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा अब मलमास लाग्यो । मलमासमा धेरै कुरा बार्नुपर्छ । मान्छेलाई लाग्ने नियम कोरोना भाइरसलाई पनि लाग्छ । अब कोरोनाले पनि मलमास बार्छ । मलमासभरी कोरोनाले केही गर्न पाउँदैन । यसअघिजस्तो कोरोना निस्फक्री हिँड्न पाउँदैन ।
मलमास सकिएपछि दशैँ सुरु हुन्छ । दशैँ त कोरोनाले पनि त मान्नुपर्ला । मानेन भने पनि दशैँमा मासु खाएर बलियो भएका नेपालीका अघिल्तिर कोरोनाको केही लाग्दैन ।
गफ दिन झापाका केपी ओलीलाई आजसम्म कसैले रोक्न सकेको छैन । अब त प्युठानी वामदेब समेत थपिएका छन् । पूर्व र पश्चिमका रमाईला गफ सुनेर कोरोनाका बालबच्चा त अब हाँसेरै पनि मर्न थाल्छन् ।
कोरोनालाई निमिट्यान्न पार्न कोरोनाविरुद्धका केही बुँदा थपेर संविधान संशोधन पनि गर्न सकिन्छ । संविधान दिवसकै छेको पारेर संविधानमा संशोधन गर्न सकियो भने कोरोना भगाउन भैरहेको बलले सार्थकता पाउँछ । संविधान संशोधन गरेर कोरोना लाग्न नदिने बुँदा थप्नुपर्छ । संविधानमा लेखिएका कुरा पूरा गर्नुपर्ने हैन, संवैधानिक व्यवस्था यस्तो छ भनेर गफ दिनका लागि हो ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा वामदेव गौतमले बल्लबल्ल ठाउँ पाउनुभयो । राष्ट्रियसभामा पुग्नुभयो । अलि दिनपछि मन्त्री पनि बन्नुहोला । कस्ता कस्ता मै हुँ भन्न त वामदेव देखेर डराउँछन्, कोरोना जाबो नडराइ सुख !
वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म कोरोनाले दुःख दिइरहनु, नेपालीले दुःख पाइरहनु, देशले मुहार फेर्न नसक्नुको एउटै कारण वामदेव गौतम ठाउँमा नपुगेर हो । प्रतिनिसभामा हारेकाले हो । मतदाताले हराएर के भो त ? पार्टीले अब ठाउँमा पुर्याएको छ । वामदेव देखेरै अब कोरोना भाग्नेछ ।